भो अति भो, कति दोष दिनु सतीलाई ? :: Press Chautari ::
"यो सतीले सरापेको मुलुक हैन, यो मती नभएका नेताहरुको सटर बनेको छ । उनीहरु यही सटरमा राजनीतिक दल नामका पसलहरु चलाएर संविधानसभाको हटिया चलाइरहेका छन् । अहिले उनीहरुको उत्पादन हो, संविधान । यो सटरमा उनीहरु कथाले मागेअनुसारकै अभिनय गरेर संविधान नामक उत्पादन बेच्ने अभिनय गरिरहेका छन् । यो नाटक ह्याप्पी एन्डिंगखाले नाटक नै हैन, सेक्सपियरियन स्याड एन्डिंग नाटक हो । यसबाट शान्त सुखायको कल्पना गर्नु नै बेकार छ । जब स्थिति नै यस्तो छ, तैपनि हामी भन्न छाडिरहेका छैनौ, यो सतीले सरापेको मुलुक हो । उनीहरुको सराप लागेर यहाँ कसैको पनि विवेक रहदैन, राम्रो गर्ने कसैको पनि भलो हुँदैन । "
धारामा पानी नआएको वर्षौ भयो तर पनि महिनावारी न्युनतम महसुल तिरेको तिरैछिन् मेरी छिमेकी दिदी । शायद दिक्क लागेर हनुपर्छ, उनले एक विहान मुखै खोलेर भनिन्, भाइले पनि त धाराको मिटर राखेवापत् पैसा त तिर्नुभएकै होला ।
दिदी, हुन त हाम्रो इतिहास नै पो कहाँ चोखो छ र ? बिटुल्याइएको गाथा जस्तो छ हाम्रो इतिहास । कोही भन्छन्,सती भनेकी काजी भीम मल्ल कि पत्नी हुन् त कोही भन्छन्, भीमसेन थापाकी पत्नी । तर, जसले जे भने पनि दुबैको अवस्था एउटै थियो । दुबैले राम्रो काम गर्दागर्दै पनि दरवारको षडयन्त्रले अनाहकमा आफ्ना देशभक्त श्रीमान् गुमाएका थिए । त्यो पनि अत्यन्त पाशविक तरिकाले । त्यसपछि के हुन्थ्यो र ? त्यतिबेलाको चलनअनुसार उनीहरुलाई जिउँदै सोलामा चढाएर सती बनाइयो । जानुअघि विलापमा उनीहरुले भने रे, यो नेपालमा कसैको पनि विवेक नरहोस् । राम्रो गर्ने कसैको पनि भलो नहोस् ।
दीदीलाई पनि हो जस्तो लागेछ क्या रे शायद । अवदेखि सतीले सरापेको देश भन्दिन भन्दै जानु पर्यो भाइ भनिन् । दिदीलाई तल गेटसम्म छोड्ने ब्ेलामा मैले थपें, बरु विवेकहीन, स्वार्थी, लम्पट र दुष्ट मती भएकाहरुको देश भने हुन्छ दिदी । जो माथि पुग्छन्, तल झर्नु नै पर्दैन जस्तो गरे जे पनि गर्छन् । आखिर एक दिन सबैले मर्नुपर्छ भन्ने मात्र ज्ञान भए पनि त यति दूरावस्था हुँदैनथ्यो मुलुकको ?
यो त एउटा सामान्य दृष्टान्त मात्र हो, सतीले सरापेको मुलुक भनेर सतीलाई नै लान्छाना लगाउने हाम्रो मूर्खताको । हामी जानेर नजानेर गलत कार्य गर्छौ । अनि त्यसको तर्कसंगत कारण खोज्नेभन्दा पनि आफूलाई ओभरस्मार्ट देखाउँदै ठाउँ कुठाउँ प्वाक्क भनिहाल्छौं, यो सतीले सरापेको देश हो । यहाँ कसैको विवेक हुँदैन । यहाँ राम्रो गर्ने कसैको पनि भलो हुदैन ।
हुन पनि हो, अपवादलाई छोडेर यो मुलुकमा त्यस्तै भएको छ । धारामा पानी आउँदैन, सतीले सरापेको मुलुक । घरमा बिजुली आउँदैन , सतीले सरापेको मुलुक । कार्यालयमा नजाराना नदिई फाइल नै चल्दैन, सतीले सरापेको मुलुक । लुट्न पाइएन भनेर पेटेलपम्प बन्द हुन्छ, सतीले सरापेको मुलुक । पशुजस्तो मान्छे कोचेर मार्न पाइएन भनेर सिन्डीकेटवालाहरु हड्ताल गर्छन्, सतीले सरापेको मुलुक । राज्यको चौथो अंगलाई चुत्थो अंग बनाउन पाइएन, सतीले सरापेको मुलुक । एप्रोन लगाएर विरामी लुट्न पाइएन, सतीले सरापेको मुलुक । न्यायमूर्ती भएर वलात्कारीको पक्षमा न्यायको तराजु ढल्काउँछन्, सतीले सरापेको मुलुक । कालो कोट लगाएर बलात्कारीको पक्षमा वकालत गर्छन्, सतीले सरापेको मुलुक । यसरी सूची बनाउने हो भने सानैमा पेट बोकाएर एवर्सन गराउने अनि महान आख्यान लेखेर मदन पुरस्कार पड्काउने अमर न्यौपान नै चाहिन्छ यहाँ । आफ्नै हाडनाता नातेदारसँग विवाह गरेर दुनियाँलाई पुरस्कार लेनदेन गर्ने फौबन्जारी नई नै चाहिन्छ यहाँ । अनि उनलाई चोख्याउन पुग्ने को को छैनन्, उनीहरु नै बन्नुपर्छ यहाँ ।
यो सतीको सराप अहिले मुलुकमा थेगो जस्तै भएको छ । जताजतै मौलाए पनि यसको खेतीपाती खासगरी राजनीतिमा अलि बढी नै फापेको छ । मुलुकमा दलहरु सिसा फुटेझैं फुटेका छन्, नफुटेकाजस्ता देखिनेहरुका पनि मन वादल झै फाटेका छन् । नेताहरुको विश्वसनियता यति तल झरेको छ कि अब उठाएर माथि पुर्याउन लगभग असम्भव छ । जे बोल्छन्, त्यो गर्दैनन् । जब इमान जमान र बोलीको नै भर नभएकाहरुलाई राज्यको पहिलो अंग र दोस्रो अंगको जिम्मा दिनुपरेको छ भने त्यस्ताबाट के अपेक्षा गर्ने ? जम्माजम्मी उनीहरुलाई एउटा काम दिइएको छ, संविधान बनाउने र मुलुकलाई ट्याकमा डाहोर्याउने । यति कामका लागि तलव तोकिएको छ, भत्ता तोकिएको छ , झण्डादेखि डण्डासम्मको व्यवस्था गरिएको छ । तर, पनि उनीहरु त्यो गरिरहेका छैनन् । आखिर किन गरिरहेका छैनन् त ? के यो पनि सतीको सरापकै कारणले हो ? के सतीकै सरापका कारण उनीहरुमा विवेक नरहेको हो ? सतीले सरापेकै कारण हरेक पार्टीमा रहेका राम्राहरुको भलो नभएको हो त ?
हो मुलुकको अवस्था यस्तै हो, विवेक नरहेको पनि हो, राम्रो गर्नेको भलो नभएको पनि हो । तर, त्यसको कारण सतीको सराप हैन, हाम्रो खराव नियत, असक्षमता स्वार्थलोलुपता र यस्तै यस्तै दूर्गुणहरु हुन् । अब त यस्तो लाग्छ, यिनीहरुलाई संविधान नै चाहिएको छैन । किन चाहियो संविधान ? चारजना बस्यो, आफूखुशी जे मन लाग्यो त्यही निर्णय गर्न पाइएकै छ । चुनाव हारेकालाई मन्त्री बनाउन पाइएकै छ । मन्त्री बनाएर कमिसन खान पाइएकै छ । प्रहरीको पहरा र कोटमा सांसदको तक्मा छँदैछ । राज्यको चौथो अंगमा अनुहार देखाउन र बर्बराउन पाइएकै छ । यति सहकाल लागेको बेला संविधान बनाएर आफैंलाई बाध्न किन चाहन्थे र यिनीहरु ?
खासमा संविधानसभा भनेको पनि यी दल र नेताहरुको व्यापार नै हो । यो व्यापार चलाउनका लागि पनि उनीहरुको यो सटर रहिरहनुपर्छ । जसरी एउटा प्राध्यापक पेन्सन नहुञ्जेल विश्वविद्यालय जान्छ, त्यसरी नै यी नेता र सांसद भनाउँदाहरुलाई पनि त कही जानुपर्ने हुन्छ । कहाँ जान्छस् ? र , के गर्छस् ? भन्ने प्रश्नको उत्तर दिनुपर्छ । त्यसैले उनीहरु आफ्ना लागि दुई क को उत्तर दिन पनि यसलाई जोगाइरहन्छन् । यस क्रममा जनतालाई मूर्ख बनाउन एकले अर्कालाई दोष दिन्छन्, गाली गर्छन्, तथानाम भन्छन् । तर, यो सबै नाटकको प्लट र पात्रहरुको चरित्रअनुसार नै भैरहेको छ । प्रचण्ड, सुशील, ओली आदि इत्यादि यसमा अरु पनि नाम जोड्न सकिन्छ, यी सबै त्यो व्यापार जोगाउने व्यापारी मात्र हुन् ।
समयक्रममा यो सब नाटकको पटाक्षेप भैरहेको छ । तैपति हामी भन्न छोडेका छैनौं, यो सतीले सरापेको देश हो । यहाँ कसैको पनि विवेक रहदैन, यहाँ राम्रो गर्ने कसैको पनि भलो हुँदैन । यसो भनेर फेरि पनि हामी हाम्रा नालायक नेताहरुको वचाउ नै गरिरहेका छौं । यसो गर्दा फेरि पनि हामी तिनै जिउँदै जलाइएका अवलाहरुलाई सराप दिएको भनेर अप्जसको भारी बोकाइरहेका छौं । कित दिने यस्तो अव्जस ? बढी भएन र ?
भो अति भो, त्यसैले अब त भन्न छोडौं, यो सतीले सरापेको मुलुक हो । यहाँ कसैको पनि विवेक नरहोस् । यहाँ राम्रो गर्ने कसैको पनि भलो नहोस् । आगे उनीहरु नै जानुन् ।
सोमवार, २०७१ पुस ०७ गते २२:०२ / Monday, Dec 22, 2014 10:02 pm